Elevator sy Conveyor Factory - China Elevator sy Conveyor Manufacturers sy mpamatsy
Auger-Type Elevator visy conveyor voamaina famindrana milina
Ny ascenseur-karazana Auger dia afaka manainga ny varimbazaha na ny katsaka ary mamoaka izany any amin'ny milina fanodinana na milina famonosana araka izay ilaina.
Ny halavany sy ny savaivony ny ascenseur azo namboarina araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Nampiasaina be tamin’ny faritra maro izy io. Ny taham-pahavitrihana avo lenta amin'ny vidiny ambany.
DTY-10E siny ascenseur milina fanandratana voamaina
DTY andian-dahatsoratra siny ascenseur dia natao ho an'ny mitohy mitsangana asa fanandratana vovoka sy granular. Izy io dia mihatra betsaka amin'ny fampiakarana tahiry betsaka amin'ny orinasa famahanana entana, fitotoana lafarinina ary fitoeram-bary amin'ny ambaratonga samihafa.
DTY-10S voamadinika siny ascenseur ny tahan'ny fahasimbana ambany ho an'ny tsaramaso tanimbary
Ny hevitray vaovao DTY bucket ascenseur dia avy amin'ny SATAKE bucket ascenseur ary natao ho an'ny fampandehanana mitsangana tsy tapaka amin'ny vovoka, granular ary kely. Izy io dia mihatra betsaka amin'ny fampiakarana tahiry betsaka amin'ny orinasa famahanana entana, fitotoana lafarinina ary fitoeram-bary amin'ny ambaratonga samihafa. Ity karazana ascenseur ity dia ampiasaina betsaka any amin'ny firenena mandroso.
Ny ascenseur slope dia ampiasaina hitaterana ny voa na fitaovana hafa amin'ny haavony tsy misy fahasimbana, rehefa manodina voa na fitaovana maina hafa.
Z karazana Elevator bucket
Z karazana siny ascenseur dia maoderina karazana ascenseur ary natao ho an'ny mitohy mitsangana asa fanandratana vovoka, granular sy kely vongan. Izy io dia mihatra betsaka amin'ny fampiakarana tahiry betsaka amin'ny orinasa famahanana entana, fitotoana lafarinina ary fitoeram-bary amin'ny ambaratonga samihafa.